Wariyaal ka tirsan TV caan oo shaqadii iska casilay iyagoo war Live ah ku jira (DAAWO) – SBC
Wariyaal ka tirsan TV caan oo shaqadii iska casilay iyagoo war Live ah ku jira (DAAWO)
Posted by editor on December 4, 2012 Comments
Laba wariye oo ka mid ah kuwa caansan mid ka mid ah Telefishinada dunida caanka ka ah ayaa iyagoo toos hawada ugu jira (LIVE), waxay shaaca ka qaadeen inay iska casileen shaqadii Tv-ga ABC ee fadhigiisu yahay wadanka Mareykanka.
Labada wariye oo kala ah Cindy Michaels & Tony Consiglio ayaa ahaa war akhriyaasha Tv-gaasi, waxaana ay ku dhawaaqeen inay iska casileen shaqadii ay ka hayeen Tv-ga ABC, iyagoo arintan ku shaaciyey markii ay soo dhameeyeen war ay wadajir u aqrinayeen.
Cindy Michaels oo ka mid aheyd labada wariye ee shaqada iska casilay iyagoo live hawada ugu jira ayaa markii ay soo dhameysay war akhrintii waxay tiri:
“Ugu damebyntii caawa, waa war akhrintii ugu dambeysay Tony iyo aniga oo aan wadajir wararka uga akhirinno halkan ABC”.
“Lixdii sano ee aan halkan wadajirka u joognay waxay aheyd mid xiiso leh, waxaan wada qaadanay waqti xiiso leh, waxaynu wada aheyn war akhriyaashii wadajirka wararka u akhrin jiray ee ugu mudada dheeraa” ayuu isaguna dhankiisa yiri Tony Consiglio.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sii raaciyey: “Anigoo ku hadlaya magaceyga iyo kan Cindy waxaan aad u jecleyn daqiiqad kasta oo aan idiin soo gudbin jirnay, idinkoo ku sugan guryihiina wararka”, waxaana ka tagida shaqadeena ay la xiriirtaa arimo badan oo soo kordhay, waxaana u aragnay inay tahay talaabo ku haboon xiligan.
Miss Michaels wareysi kale oo ay siiyey wargeyska Bangor Daily News waxay ku sheegtey in iscasilaada iyo iyo Tony ay la xiriirto dhibaatooyin ka qabsadey maamulka Tv-ga, taasi oo ay arkeen inay ku haboon tahay in ay shaqada isaga tagaan.
“Waxaa jirtey qadarin la’aan shaqaalaha loo hayey iyo waliba ishaysid xoogan, waxaana labadeenu dareenay inaanay waxba noo ogeyn mulkiilayaasha iyo maamulka sare ee, kuwaasi oo si aan ku fadhin xirfad u maamulaya hawlaha wararka” ayay hadalkeeda Miss Michaels.
Laakiin sheegashada ka timid Miss Michaels waxaa si adag gaashaanka ugu daruuray madaxweyne kuxigeenka Tv-ga ABC Mike Palmer oo gees isaga riixay eedeymaha haweenaydan, waxaana uu sheegay in kol horeba labadaasi wariye ay u qorsheysneyd inay shaqada isaga tagaan.
“Maamulka sare wax shaqo ah kuma laha hawl maalmeedka wararka ee Tv-g” ayuu yiri Mike Palmer oo si adag u beeniyey wararka ay baahisay Cindy Michaels.
Link-ga ka hoose ka daawo VIDEO-ga wariyaaashan xiligii ay warkan iscasilaada live-ka u aqriyeen.DAAWO VIDEO